Fahaleovantenan’ny vehivavy : Mitana anjara toerana lehibe ny fanabeazana -
AccueilSosialyFahaleovantenan’ny vehivavy : Mitana anjara toerana lehibe ny fanabeazana
10/03/2018 admintriatra Sosialy 0
Niavaka. Tamin’ny alalan’ny atrikasa narahina fampiofanana no nanamarihan’ny Vehivavy mfm ny andron’ny 8 Marsa, andron’ny vehivavy. Niakatra teto an-dRenivohitra ireo komitin’ny vehivavy isam-paritra, avy amin’io antoko io, niatrika izany. « Ny fanabeazana no fototry ny fampandrosoana, ka ny fomba fijerinay dia any amin’ilay fanabeazana isam-batan’olona mihitsy no ilaina mba hahatonga ny vehivavy hahaleotena afaka mivoatra. Napetraka mihitsy ny fanontaniana hoe inona no olana tsy ahafahan’ny vehivavy mivoatra ? Fantatra tamin’izany fa ao amin’ilay fiofanana no lesoka », araka ny fanamarihana nentin’ny filoha nasionalin’ny Vehivavy Mfm, Rasoaniaina Malalatiana.
Manam-pahaizana manokana momba ny toe-karena avy any Japon no nantsoin’izy ireo hizara ny traikefany tamin’ireo mpizaika. « Tany am-boalohany dia nitovitovy tamin’ny Japon ny toekarentsika, saingy aty aoriana kosa dia very lavitra isika. Inona no nahatonga izay elanelana izay ? Aorian’ity hetsika ity dia tanjona ny hanan’ireo vehivavy fahalalana entiny miatrika ny fiainany. “ Aminay, tsy beazina hitady asa eraky ny minisitera ireo nahazo fiofanana fa beazina hahay hamorona asa ho an’ny tenany, na hiditra any anatin’ireny koperativa, na fikambanana,na Ong ireny”, hoy hatrany ny fanazavan’ity filohan’ny vehivavy Mfm ity.
Lohahevitra nentina tamin’ity atrikasa sy fampiofanana ity ny hoe “toe-tsaina sy haitao hampivoatra isan’andro”. Izany hoe, misy fitohizany fa tsy mijanona eo akory ny fampiofanana. Hiitatra hitety faritra izahay, izany hoe ireo voaofana ireo no hizara ny traikefany any amin’ny isam-paritra any, ary mipaka amin’ny isam-batan’olona ilay fampiofanana avy eo.
Omaly no nanome voninahitra ny lanonana fifamindram-pibaikoana teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ary ireo manamboninahitra sivily sy miaramila. Tamin’izany indrindra no ...Tohiny